Guddoomiyaha Ku Meel Gaadh Ah Ee UCID Oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Hargaysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Guddoomiyaha Ku Meel Gaadh Ah Ee UCID Oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Hargaysa
Published on October 3, 2017 by Khadar A Muse (Hargeisa Office) · No Comments
Hargaysa (SDWO): Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga UCID Maxamed Macalin Xirsi, oo safar shaqo dalka Maraykanka muddo ugu maqnaa ayaa maanta si balaadhan loogu soo dhaweeyay magaaladda Hargaysa ee caasimadda Somaliland.
Waxaana soo dhawaynta Maxamed Macalin Xirsi, ka qayb qaatay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka UCID, xoghayaha guud, xoghayaha gudiga fulinta, xoghayaha xidhiidhka saxaafadda, masuuliyiin xisbiga ka tirsan iyo taageereyaasha xisbiga.
Ku xigeenka xoghayaC/naasir Qodax, oo ka mid ahaa masuuliyiintii soo dhaweeyay guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ayaa ugu horayn guddoomiyaha ku meel gaadhka ah dalka ku soo dhaweeyay, isagoona xusay in uu ku soo beegmay xili aad loogu baahnaa.
C/naasir Qodax, ayaa sidoo kale guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ugu bushaareeyay in xisbi ahaan ay ku faraxsan yihiin imaatinkiisa, isla markaana uu masuulkani qaban doonno hawl weyn oo ka banaan xisbiga gaar ahaana ololaha doorashadda madaxtooyadda oo la filayo in uu maalmaha inagu soo foolka leh dalka ka bilaabmo.
Waxa kaloo uu Qodax, ayaa tilmaamay in xubnaha musharaxa madaxweyne ku xigeenka UCID iyo guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ay ka soo kala jeedaan goboladda bariga iyo galbeedka dalka, taasina ay xisbi ahaan uga dan leeyihiin sidii loo ilaalin lahaa wada jirka iyo midnimadda ummadda Somaliland.
“Waxanu ugu bushaaraynaynaa goboladda bariga, in is-bedelka balaadhan ee aanu imika xisbiga ku samaynay, oo ah musharaxa madaxweyne ku xigeenka oo ka soo jeedda goboladda bariga in ay tahay fursad kale oo u soo korodhay goboladaasi. Sidoo kale guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga UCID wuxuu ka soo jeeddaa goboladda galbeedka”ayuu yidhi C/naasir Qodax.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Waa markii u horaysay oo xisbiyadda Somaliland ay sidas sameeyaan. Arrimahaas oo dhan waxaanu u samaynaynaa in wada jirka ummadda Somaliland uu mid noqdo. In xisbiyadda siyaasadda ee Somaliland la wada yeesho, xisbiyaduna waa hanti la wada leeyahay.
Xisbiyadda Somaliland, reerna gaar uma laha, gobolna si gaara loogama laha, balse waa xisbiyo la wada leeyahay. Sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in xisbiyadoo dhanba ay bulshadda Somaliland oo dhan ka wada muuqato, waana taas midda aanu musharaxa madax weyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha ku meel gaadhka ah uga dhigno masuuliyiin ka soo jeedda goboladda bariga iyo galbeedka”.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ololaha ee xisbiga UCID oo isaga laftiisu ka soo jeedda goboladda bariga oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga uu dalka yimaaddo.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Aad ugu mahad celinayaa musharaxa xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, oo isku dheeli tiray Somaliland. Waxaanu go’aansaday in dawladnimadda iyo xisbiyadda Somaliland ay dhaafaan magaaladda Hargaysa, isla markaana uu goboladda dalka ku fidiyay xisbigiisa”.
Geesta kale guddoomiya ku xigeenka ku meel gaadhka ah ee xisbiga UCID ee la soo dhaweeyay ayaan isagu madashii lagu soo dhaweeyay wax hadal ah ka jeedin, inkastoo xubnihii xisbiga ka socday ee soo dhaweeyay iyo madax dhaqameed kaleba ay halkaasi ka hadleen.
Daawo Hadaladii Soo Dhaweynta: